10 Matipi Ekugadzira A Real Estate Webhusaiti Iyo Inotya Vanogona Vatengi uye Vatengesi Kuti Vabatanidze | Martech Zone
Svondo, Zvita 13, 2020 Svondo, Zvita 13, 2020 Sumiya Sha
Kutenga chivakwa, imba, kana kondomu chinhu chakakosha kudyara… uye kazhinji zvinongoitika kamwe chete muhupenyu hwese. Zvivakwa zvekutenga zvivakwa zvinokurudzirwa neakawanda eanopokana manzwiro - saka pane zvakawanda zvinoda kutariswa kana uchigadzira real estate webhusaiti izvo zvinovabatsira parwendo rwekutenga.
Basa rako, seanomiririra kana real estate broker, ndeyekunzwisisa manzwiro uku uchivatungamira kune zvine musoro uye zvine ruzivo sarudzo. Heano mazano matanhatu eku dhizaini uye gadzirisa yako webhusaiti izvo zvinokubatsira iwe kuve mutungamiriri wedhijitari mukutengesa zvivakwa.
Zano 1: Sanganisa Yemukati Kutsvaga uye Kufirita kugona
Kana yako tarisiro iri kutenga yezvivakwa, ivo vanogara vaine chaiwo maitiro mufungwa. Panongouya mushanyi pane yako saiti, varatidze kuti iwe unogona kunongedza zvavanoda uye nekupa zvivakwa zvinoenderana nezvavanotsvaga.
Sanganisira kuiswa kuri pachena kwenzvimbo yekutsvaga yemukati ine mafirita ayo anotendera iwe kugovanisa zvivakwa zvako. Kana zviitwa zvako zvichinyanya kutengwa pakutenga pamba, semuenzaniso, sanganisira mutengo, rudzi rwechimiro, saizi tsoka, saizi mijenya, huwandu hwedzimba dzekurara, huwandu hwedzimba dzekugezera, uye humwe hunhu (nzvimbo yemoto, dziva, garaji, nezvimwewo).
Kana yako inventory inosanganisira akawanda matunhu, mhando dzevhu, uye masitayera ezvivakwa, iwe ungangoda kuwedzera iyo yekusefa kugona kuitira kuti vatengi vako vagone kudzora kwavo kutsvaga kune kwakatarisana nharaunda uye mamwe maitiro epfuma.
Zano 2: Govera Peji Kune Nharaunda Imwe Neimwe
Sarudzo yenharaunda yakakosha kana zvasvika pakutenga chivakwa. Dzosera peji kunzvimbo yega yega, nharaunda, kana kunyange dunhu rechikoro kwaunopa kutengesa kana kubhadharisa zvivakwa. Pinda inoshanda uye yakakosha ruzivo kuti uzive nezvedunhu. Uye gara uchisanganisira mepu inonyatso kuratidza imwe neimwe yezvivakwa zvako pamwe nedzimwe nzvimbo dzekufarira:
Nzvimbo dzepedyo (zvikoro, zvitoro, makiriniki, zvipatara, machechi)
Zvivaraidzo (mapaki, madziva ekushambira, makosi egorofu)
Zviitiko zvekushanya munzvimbo iri pedyo
Gara uchitaurirana mararamire anowanikwa munharaunda. Iyo inzvimbo yakanyarara uye yakachengeteka, yakanaka kumhuri dzechidiki, kana kuti panzvimbo inzvimbo ine fashoni padyo neakanakisa maresitorendi, mabhaisikopo, uye dzimba dzekuitira? Pamusoro pekuzivisa vashanyi vako nezvenzvimbo dzavangadai vasingazive, mapeji aya anovandudza indexing yepeji rako kutsvaga kwakatsvaga.
Zano 3: Ipa Ruzivo Rwega rwePfuma yega yega
Mutengi wanhasi online haadi kufonera mutengesi wezvivakwa kana broker kuti awane ruzivo rwakakosha. Ita shuwa kuti mapeji anotsanangura zvivakwa zvako kana zvikamu zvine ruzivo runotevera:
Kuwanda kwemakamuri, kusanganisira yekurara uye yekugezera
Iwo akaenzana mativi, nzvimbo yekugara, uye nzvimbo dzemakamuri (metric neumambo)
Magetsi, kudziyisa, uye masisitimu emvura
Kunze kwekugara nzvimbo (maberere, madhiri, nezvimwewo)
Nzvimbo dzakajairwa nemasevhisi anopiwa (mune macondiniums)
Furniture kana midziyo yemagetsi inozosanganisirwa
Gore rekuvaka kana kugadzirisa kwakaitwa nekufamba kwenguva
Mikana yekugadzirisa patsva (semuenzaniso. Pasi pekugadzirisa)
Uye, hongu, sanganisira mapikicha anoshamisa ezvese zvinhu zveiyo chivakwa, kunze kwemusha kubva kukona yega yega, mafoto emakamuri ese, uye kunyangwe mifananidzo yedrone yeiyo imba. Kana pikicha yakakosha chiuru chemazwi, chimbofungidzira kukura kwakakura kuita gumi nemaviri mapikicha akanaka! Haufanire kuhaya nyanzvi yekutora mifananidzo… mazuva ano mafoni emafoni ane kugona kunoshamisa mazuva ano. Nekona yekurudyi uye mwenje, unogona kuve nemifananidzo yakanakisa inobata zvese zveimba yacho.
Zano 4: Govera A Nzira Kugovana Iyo Imba
Vatengi vemazuva ano vekutengesa zvivakwa havawanzo kutenga vega, saka vape sarudzo dzinoverengeka dzekugovana neemail, zvemagariro, kana nekutumira meseji Iwe unogona kutoshuvira kupa iyo "Tumira kune shamwari kana waunoshanda naye" fomu iyo inotora yavo email kero uye yavo runyorwa rwevanofarira mapato - ingo chenjera kuisa tarisiro pane kana iwe kana iwe uchizosangana navo.
Uyezve ive shuwa yekuita chero maratidziro anoteedzereka kuitira kuti iwe unzwisise kuti ndeapi masocial media services ari kutyaira akanyanya masheya uye kushanya kune yako pfuma
Zano 5: Ita Kukubata Iwe Nyore, Yakagadzirirwa, uye Dzvinyiriro-Yemahara
Sezvo vatengi vachiwanzozeza kusvika kune vamiririri nevatengesi, iwe uchazoda kuvaita kuti vasununguke. Paunenge uchisanganisira mazita nenhamba dzenhare dzemumiriri wako, ita shuwa yekuisa pikicha pamwe chete neshoko remunhu kuti kubvunza kwavo hakuzove nekumanikidza.
Ive neshuwa yekuisa fomu pane yega yega peji peji pamwe neruzivo rwepfuma mundima yakavanzwa. Nenzira iyi, kana iwe ukasvika kwavari, unogona kutsvagisa chivakwa uye kugadzirira hurukuro!
Zano 6: Tora Analytics uye Teedzera Yako Yevashanyi Dhata
Kunyangwe iwe uri mudiki kana muhombe mutambi mundima yezvivakwa, pasina mubvunzo uchabatsirwa nekuunganidza ruzivo nezve vashanyi vako. Ichi chikamu cheshoko rako rekushambadzira chingatora pane kukosha kwakasiyana, zvinoenderana nebhajeti uye zviwanikwa zvevanhu zvaunazvo. Zvakawanda zvinotungamira manejimendi ekushandisa zvinogona kubatsira zvakanyanya panguva ino.
Tungamira Mafomu Ekutora
Kutanga kuunganidza ruzivo nezvevashanyi vako nekuvatendisa kuti kupa kwavo email kero kunobatsira mukutsvaga kwavo kwekutengesa zvivakwa. Heano mienzaniso mishoma yemazano anoshanda ekubata tarisiro yeruzivo muindasitiri yezvivakwa.
Vhura imba uye wega wega mikana yekushanya
Makwikwi kana kukwidziridzwa
Rondedzero yeVIP yezvakananga zvivakwa zvezvivakwa (semuenzaniso. Madonhwe emitengo)
Matunhu edzimba dzimba matipi uye kuraira
Zvivakwa zvitsva zvivakwa
Isa mafomu ako kunge bhatani popups, slide-ins, kana ugovaisa pasi petsoka peji rega rega.
Chero zvazvingaitika, ramba wakanangisa pane chako chikuru chinangwa: kuunganidza ruzivo kune vangangove vatengi. Dzivisa makwikwi asina kujeka kana kukwidziridzwa izvo zvisina hukama nechinhu chauri kutengesa, zvikasadaro, unogona kukurudzira vashanyi vasina kukodzera kunyoresa. Dambudziko rekutora vangangoita vatengi vachisarura vashanyi vasingafarire zvivakwa zvako.
Anoteedzana Anomhara Mapeji
Kana iwe uri kuisa mari mukushambadzira uye kushambadzira kuyedza, usaite iko kukanganisa kwekutungamira yako yese traffic kune yako saiti peji remba. Gadzira akasarudzika mapeji ekumisikidza kune yega sosi - kungave kushambadzira kwepepanhau remuno, bhiribhodi, kana meseji yeemail. Nekusika uye kugadzirisa munhu a peji yekumhara yega yega yepakati kana chiteshi, kwete chete iwe uchave unokwanisa kuteedzera kushanda kwekushambadzira kwako, iwe unogona zvakare kugadzirisa yako meseji ipapo.
Peji rega rega rekumhara rinofanirwa kuve nechinangwa chimwe chete. Mushandisi anosvika pane ino peji anofanira kukwanisa kunzwisisa chako kupa mumasekondi mashoma uye anozviona zvichifadza zvakakwana kuzadza fomu neruzivo rwake.
Heano mamwe mikana mikuru yekumhara mapeji:
Kuzivisa nyowani chivakwa chivakwa
Zuva reimba yakavhurika kana kushanya kwega kushanya
Kudhanilodha gwaro rekutenga pamba
Bvunzo remibvunzo yekubatsira pakutenga imba
Chipo chekusimudzira pane mamwe makondomu mayunitsi
Zano 7: Dhizaini YeMafoni Midziyo Kutanga
Nepo desktop ichipa tani yezvivakwa (pun yakanangwa) kuratidza neruzivo ruzivo, kuvaka ruzivo rwevashandisi pane mbozhanhare inonzwisisika uye yakapusa inogona kunetsa. Kunyangwe iri kuvandudza peji rekutsvaga iro rakaomarara kana a nharembozha yekutengesa zvivakwa uko vashandisi vanogona kunongedza kuburikidza nemifananidzo yeimba, dhizaini yemafoni ichave yakakosha kune kukanganisa kweako real estate webhusaiti dhizaini.
Tora nguva uchishandisa yako wega saiti pane mbozhanhare uye kukumbira mhinduro kubva kushamwari uye vaunoshanda navo kuti nyore saiti yako kushandisa. Iwe zvakare uchada kukamura yako mobile search, mushanyi kuyerera, uye fomu data iro rinowanikwa kuburikidza nefoni kushanya kuti uone kuti iri mushandisi-inoshamwaridzika uye inofadza.
Kana iwe ukagadzira yekutanga mobile, usashamisika kana iwe ukaona ichikwakuka mukutsvaga kwako injini yekutsvaga uye nhamba yevatengi inowedzera! Nhare yakakosha kune yega webhusaiti muindasitiri yezvivakwa!
Zano 8: Tanga A Real Estate Blog
A blog iri mukana wakakwana wekubatana neako anogona vatengi. Kugovera nyaya dzevanhu, matipi ekutenga kumba, mabhizimusi ematunhu aunokoshesa, kuvhurwa kweresitorendi, chikoro, neruzivo rwemutero zvemuno… zvese zvinovaka masimba ako uye hukama nehama dzako. Kunyangwe iwe ungangodaro usina kumbosangana navo, bhurogu inopa mukana wekuti vazive iwe semutungamiri wavanogona kuvimba mukati menzanga yauri kutengesa kwauri.
Kunze kwekutengesa, basa rako semupi wezano rakakosha muhukama hwebhizinesi hwaunokudziridza nevatengi vako. Kutenga chivakwa chinhu chakakosha, saka chiremera chekuvaka seiye real estate mumiririri wako mushanyi anogona kuvimba chakanyanya kukosha.
Kuchengetedza blog inzira yakanaka yekuchengetedza mutengi zvakare. Kana iwe uri kupa kuraira pamusoro pevaridzi-vemba, kugadzirisa, kugadzirisa, uye kuwedzera kukosha kweaseti yavo - mutengi anokuchengeta iwe mupfungwa kana vatamiswa uye vachida kutengesa, kana mhuri yavo ichichinja uye ivo vanofanirwa kuenda mukati chivakwa chakakodzera.
Misoro yaunogona kushandisa pane yako blog haina magumo. Heano mienzaniso mishoma:
Kutenga imba (maitiro, sarudzo, sarudzo, mari)
Kuchinjika mumusika wezvivakwa
Mishonga yepamutemo (magwaro epamutemo, vimbiso, kukanganisa kwakavanzika)
Zano remwaka (gadheni, kuchengetedza, nezvimwewo)
Zano 9: Tanga Newsletter
Takakurukura dzimwe pfungwa dzekunyorera pamusoro pemafomu ako ekutora, asi kukosha kwetsamba hakugone kurerutswa. Fungidzira tsamba yako yeshanduro senzira yekusundira webhusaiti yako kune waunogona kutenga kana mutengi ... uchivapa iwo mazano akakosha, zviwanikwa zvematunhu, uye uchienderera nekuvaka kuvimbika uye kuvimba navo. Kana iri mutengi, vanogona kuzopedzisira vawana chivakwa chavaitsvaga. Kana iri mutengi, iwe unoramba uchichengetedza hukama navo saka kana vagadzirira kutengesa, uchave mumiriri ari pamusoro wepfungwa!
Rutivi chinyorwa: Tsamba yenhau haifanire kunge iri mutoro! Mazuva ano mawebhusaiti ane syndication feeds ayo anogona kungozvimisikidzwa, akarongwa, uye kuburitswa muemail papuratifomu iwe usati wamboda kubata bhatani! Taura neyako webhu dhizaini timu maitiro ekuisa RSS kuemail kugona.
Zano 10: Shambadzira Yako Saiti uye Tsamba ... Kwese kwese!
Sanganisira yako saiti URL pane yega bhizinesi kadhi, flyer, gwaro, email siginecha, kusaina, uye chero chinhu chipi zvacho chaunoita. Vatengi vanhasi vanofarira kuzvishandira uye vanoshandisa webhu kutsvagisa uye kuita sarudzo dzekutenga. Paunosangana nevatengi, vatengesi, maindasitiri nyanzvi, uye varidzi vemabhizinesi ematunhu kunze kuruzhinji, bvunza kana uchigona kusaina iwo tsamba yako. Iwe unogona kushamiswa nenhamba yekutumirwa uye zvikamu izvo zvako zvemukati zvichaburitsa mushure memwedzi mishoma yekusimudzira.
Nemazano aya, iwe wakashongedzerwa kuti uwedzere kukanganiswa kweprojekiti yezvivakwa pawebhu!
Tags: mobile real estatenharembozhamushareal estate kumhara mapejikushambadzira kwezvivakwareal estate nharetsamba yezvivakwareal estate saitireal estate saiti dhizainireal estate webhusaiti
Sumiya ndiye munyori wewebhusaiti Xploited Midhiya. Semunyori wezvemukati, Sumiya akaedza akawanda mawebhusaiti dhizaini uye anotarisira kuvagovana nevaverengi vake.